Berlusconi oo siyaasadda ku soo rogaal celinaya - BBC News Somali
Berlusconi oo siyaasadda ku soo rogaal celinaya
81 jirkan siyaasadda muddada ku jiray waxaa saameeyay fadeexado
Ra'isulwasaarihii hore ee dalka Talyaaniga Silvio Berlusconi ayaa u muuqda in uu saaxadda siyaasadda kusoo laabanayo kadib markii isbahaysi uu isaga taageero ay guulo ka gaareen codbixin ka dhacday gobolka Sicily ee dalkaas.
Codka ka dhacay jasiiradan ayaa waxaa loo arkaa in ay saansaan u tahay doorashada sanadka dambe ka dhacaysa guud ahaan dalkaa.
Ninkan 81 jirka ah, islamarkaasna taajirka ah ayaa waxaa horay u hareeyay fadeexado kala duwan isaga oo dowladda ku jira iyo isaga oo banaanka ka ah.
Berlusconi oo afar jeer Ra'isulwasaare kasoo noqday Talyaaniga ayaa siyaasadda ka maqnaa tan iyo intii baarlamaanka dalkaas ay ka codeeyeen afar sano ka hor.
Waxa uu isku dayayaa in uu laalo sharci isaga xafiiska ka hor istaagaya inta aanan la gaarin doorashooyinka dhacaya sanadka 2018-ka.
Maxkamadda xuquuqda aadanaha ee Yurub ayaa iyaduna dib u eegaysa dacwadiisa dabayaaqada sanadkan.
Taliyaaniga: Dhaqaale badan oo ku baxaya dib u dhiska guriyihii dumay
Qalalaase ka dhashay natiijada aftidii Talyaaniga
"Sicily waxa ay dooratay wadadii horumarka, daacadnimada iyo dhismaha" ayuu ku yiri Berlusconi muuqaal lasoo dhigay bartiisa Facebook.
Dowlad goboleedka jasiiradda Sicily ayaa waxaa doorashada ku guuleystay xisbigiisa Forza Italia iyo xisbiyo midigta ah.
Xigashada Sawirka, Getty Images/AFP
Berluscon wuxuu 30 sano lahaa kooxda AC Milan, wuxuuna iska iibiyay 2017-kii
Natiijada ayaa la sheegay in ay caqabad ku tahay dowladda bidixda dhexe ee hadda Talyaaniga ka talisa, taas oo carro kala kulantay shacabka, sababtuna tahay qalalaasaha dadka soo galootiga ah ee dalkaas ka taagan.
1986: Isaga oo ah ganacsade macaash badan sameeyay, ayuu iibsaday naadiga kubadda cagta ee AC Milan
1994: Waxa uu iska casilay xilalkii uu ka hayay ganacsiyadiisa, wuxuu sameeyay xisbiga Forza Italia, waxaana loo doortay Ra'isulwasaaraha Talyaaniga, balse 7 bilood markii uu xilka hayay ayaa lagu qasbay in uu isu casilo fadeexado musq awgood.
1996: Waxa uu guuldaraystay doorashooyinkii guud, waxaana Ra'isulwasaare noqday Romano Prodi
2001: Mar labaad ayuu ku guuleystay doorashooyinka, wuxuuna noqday
2006: Markale ayaa waxaa doorashada oga reeyay Mr Prodi , waxaana lagu amray in uu maxkamadda kasoo hor muuqdo dacwado la xiriira musuqmaasuq awgood.
2008: Markale ayuu doorashada ku guuleystay, wuxuuna noqday Ra'isulwasaare.
2011: Waa uu is casilay kadib markii uu lumiyay aqlabiyaddii baarlamaanka
2012: Maxkamad ayaa ku heshay dambi musuqmaasuq iyo wax isdabo marin ah.
Shacabka Taliyaaniga oo u codeynaya isbedel lagu sameeyo dastuurka
Muuqaal, DAAWO: Tuullo ku taalla Taliyaaniga oo maalin kasta dhulka dillaaco
Muhaajiriin ku dhimatay xeebaha Taliyaaniga
Taliyaaniga iyo Spain oo barbar dhac galay kullan ka mid ah isreebreebka koobka adduunka.